E-Journal: June 2009
ကျနော် ကဗျာဆရာမဟုတ်ပါ။ သို့သော် ကျနော်အချစ်ဆုံးဟာ ကဗျာပါ။
ကဗျာကြောင့် ကျနော့်ဘဝအလှည့်အပြောင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကဗျာကြောင့် မိဘဆရာတွေကို စိတ်ဆင်းရဲဝမ်းနည်းစေခဲ့ရပါတယ်။ ကဗျာကြောင့်ပဲ မိဘဆရာ ဇာတိရပ်ရွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းသာစေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကဗျာကြောင့်ပဲ မိဘဆရာ ဇာတိရပ်ရွာကို ခွဲခွာခဲ့ရတယ်။ ကဗျာကြောင့်ပဲ ချစ်သောအရာတွေနဲ့ ဝေးကွာခဲ့ရတာ နောက်ဆုံး ကဗျာတွေကိုယ်တိုင် အဝင်အပါ။
ကျနော် ကဗျာမစပ်ဖြစ်တာ နှစ်နဲ့ချီပြီးကြာပါပြီ။ (များသောအားဖြင့် ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ စပ်ယူရတာပါ)။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ သူ့အလိုလို စီးဆင်းပွင့်အန်လျှံကျဆဲပါ။ အဲ E-Journal မှာ ပါဝင်လာတာလည်း ကဗျာကြောင့်ပါပဲ။ ဆရာ အိမ်လွမ်းသူ (မှန်နီကုန်း) ရဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို ဖတ်အပြီးမှာ လျှံကျလာတဲ့ *“လူတွေရဲ့ မြုိ့” ကဗျာလက်ရေးမူလေးကို စကင်ဖတ်ပြီး အီးမေးပို့လိုက်မိရာက သူ့ကိုယ်စား ကျနော်ပါဝင်ရေးသားနေရတော့တာပါပဲ။ (ဟဲ ဟဲ ချစ်ခြင်းအားဖြင့်ပါ ဆရာအိမ်လွမ်းသူခများ…)
အဲဒီကဗျာလေးထဲက *“မြစ်ချောင်းတွေ မရှိတဲ့အဆုံး တစ်မြို့လုံးကလမ်းတွေကိုပဲ ကောက်ကွေ့ထား”တဲ့ မြို့ကလေးမှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ကျနော်ဟာ ကဗျာကြောင့် ဇာတိရပ်ရွာကို ခွဲခွာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မြစ်ချောင်းတွေ ထောင်းလမောင်းထရှုပ်ပွနေတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ မသွားဖူးတဲ့ မြစ်ချောင်းမရှိလောက်အောင် ခရီးပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
စကားမစပ် မြန်မာပြည်မှာ ခရီးသွားရတာ (ကျနော့်အမြင်တော့) ရေလမ်းခရီးဟာ သက်တောင့်သက်သာအဖြစ်ဆုံး၊ အစဉ်အပြေဆုံးပါ။ ရေချိုးခန်း၊အိမ်သာတွဲရက်ပါ သီးသန့်အဲယားကွန်းအိပ်ခန်း၊ အခန်းထဲအရောက် စားသောက်ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှု စသဖြင့်၊ စသဖြင့် တော်ရုံတန်ရုံ တည်ခိုးခန်း၊ဟော်တယ်မယှဉ်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်မဟုတ်တဲ့ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုတာ ရှားမှရှားပဲ မဟုတ်လားဗျာ။ ပြည်တွင်းရေကြောင်းက အခန်းထိမ်းဝန်ထမ်းတွေ တကယ်ချီးကျူးစရာပါ။ အဲ ဒါပေမယ့် ကြွက်တွေ၊ ပိုးဟပ်တွေကတော့ ဖွားဖက်တော်တွေမို့လား မသိပါ။ လုံးဝ လုံးဝ မကင်းနိုင်ပါ။
ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မထွန်းကားသေး (သို့) ပြန်လည်မှေးမှိန်သွားတာကြောင့် ပမာဏဖောင်းပွနေတဲ့ငွေကြေးတွေကို ခရီးဆောင်အိတ်နဲ့အပြည့် ခပ်တည်တည်သယ်ယူသွားလာလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ ခရီးသည်တစ်ဦးခမျာ စောစောက ပြည်တွင်းရေကြောင်းက ကောင်းမှကောင်းဆိုတဲ့ သင်္ဘောပေါ်က အဲယားကွန်းပြည့်အိပ်ခန်းထဲမှာ ပါသမျှငွေတွေအားလုံးနီးပါး ကြွက်ကိုက်သွားတာခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ သူက ပိုက်ဆံထည့်ထားတဲ့အိတ်ထဲမှာ စားစရာတစ်ချို့ ပါ ထည့်ထားမိတာကြောင့်ပါ။( အေးဗျ ဒါလေးတွေကို သီးသန့်ပို့စ်အဖြစ်ရေးရင် ပိုကောင်းမှာ။)
အဲ ပြောချင်တာက ကျနော်ဟာ သာမန့်သာမန် ကဗျာချစ်သူ၊ စာချစ်သူတစ်ယောက်မျှသာ ဖြစ်သော်လည်း ကဗျာကို ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုပမာ ကျနော့်ကို ကဗျာရေးပေးပါ(သို့)စပ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုလာတဲ့အခါတွေမှာ (စိတ်ဆိုးခြင်း၊စိတ်တိုခြင်းဟာ ကျနော့်နဲ့ ဘာမျှမဆိုင်တာမို့ စိတ်မဆိုး၊ စိတ်မတိုသော်လည်း) ကျနော့်ရင်မှာ ကျင်နေအောင်နာတာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် တောင်းဆိုသူတို့ သိခွင့်မရပါ။
အောက်ပါ ကဗျာလေးဟာ အဲဒီလို ဧရာဝတီတိုင်းမှာ အဲဒီလို သင်္ဘောနဲ့ခရီးသွားကြစဉ် အဲဒီလို တောင်းဆိုခြင်းခံရအပြီးမှာ အဲဒီလို ကျနော်စပ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင် ၂၀၀၁ ခုနှစ်က ဖျာပုံ-ဘိုကလေးခရီးစဉ်သွားစဉ်က ဖြစ်ပါမယ်။ ခုလို (၈)နှစ်ကြာပြီးတဲ့ အခါ … ဖျာပုံ၊ဘိုကလေးဟာ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဟာ ………
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 7:31 PM3comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 11:44 PM4comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 12:30 PM5comments
လွန်လေပြီးသောအခါ ကျနော် ရွှေပြည်ကြီးက ခွာတဲ့အခါ အောက်ပါစာအုပ်ကလေး(၃)အုပ်သာ ပါလာခဲ့ပါတယ်။
၁။ ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်တဲ့ ”လူလေးသို့ပေးစာများ“
၂။ ဆရာနေမျိုးရဲ့ ”မြည်နေတဲ့ထရမ်းပက်“ - ဝတ္ထုတိုငယ်စု နဲ့
၃။ Stephen R. Covey ရဲ့ ”The7Habits of Highly Effective Peoplen“
ဒီနေ့အဖို့ ဆရာနေမျိုးရဲ့ ”မြည်နေတဲ့ထရမ်းပက်“ကိုမှ တခုတ်တရ ရွေးချယ်သယ်ယူလာတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ဝေမျှလိုပါတယ်။
ဒီနေ့ ငါစားတာတွေ နည်းနည်းများသွားပြီ။ မက်(စ်)ပါဝါတစ်ပုလင်း (ငါ့ပိုက်ဆံနဲ့ငါဝယ်သောက်တာ)၊ ကန်စွန်းဥသုံးလုံး။ ကြီးနှစ်၊ သေးတစ်။ အိမ်မှာပြုတ်တာ၊ လက်ဖက်ရည်ကတော့ မနက်ကနေ စတွက်ရင် ညထိ (၄)ခွက်တော့ရှိမယ်။ စတော်ဘယ်ရီဖျော်ရည်တစ်ခွက် (ဖိုးကျော်ကတိုက်တာ)၊ ကွမ်းယာက (၁၂)ယာလောက်တော့ ရှိမယ်။ ရေခဲရေ (၁)ခွက်၊ မနက်က ထပ်တစ်ရာတစ်ချပ်၊ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ခွဲလောက် ရှိမယ်။ (သမီးတို့မကုန်တာ ငါသောက်သေးတယ်)။ ထမင်းကတော့ မြိန်သလိုလို မမြိန်သလိုလိုနဲ့။ စတော်ဘယ်ရီဖျော်ရည်သောက်နေတုန်း အစ်မ မဝင်းမေကို သတိရမိသေးတယ်။ မြို့ထဲက နေပူပူထဲဖြတ်ပြန်လာတော့ အေးအေးချိုချိုချဉ်ချဉ်လေး ရေငတ်ပြေသောက်ချင်လို့ (၄)ကွေ့အလွန်က လမ်းဘေးအအေးဆိုင်လေးမှာ မက်(စ်)ပါဝါသောက်ခဲ့တာ ထင်သလောက် အရသာမတွေ့ဘူး။ ငါ့ပါးစပ်ထဲမှာ နည်းနည်းသက်တက်တက် ဖြစ်နေသလိုပဲ။ အပြီးသတ်မှာ ခါးခါးသွားတယ်။ နေ့လယ်က ကိုဝေးခေါင်နဲ့ ထမင်းဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာ ထမင်းအတူစားဖြစ်တယ်။ သူကငါးမြင်းနဲ့၊ ငါကဝက်သားနဲ့။ ဝက်သားတုန်း က ငါ့အကြိုက်တော့ နည်းနည်းမာနေတယ်။ ကုလားပဲဟင်းက အိနေတာပဲ။ ကောင်း။ ညနေအိမ်ကချက်တဲ့ဟင်းက ကြက်ဥချက် (တစ်ယောက်တစ်လုံးနှုန်း)၊ သရက်ချဉ်သုပ်၊ စွန်တာနီပဲနဲ့ ခွေးတောက်ရွက်ဟင်းချို။ မြိ်န်သလိုလို မမြိန်သလိုလိုနဲ့။ ဒီနေ့အဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အလိုလိုက်တာ နည်းနည်းများသွားပြီ။ တန်ရုံကောင်းတယ်။ အစ်မသိရင် ငါ့ကိုဆူမှာပဲ။ အပိုဆာဒါးတွေ။ ဒါပေမဲ့ ငါလိမ္မာတာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျုံးဘေးက ပုစွန်ဆိတ် ခုန်နေတဲ့ ထန်းရည်သည်လေးတွေဆီ ဝင်မသောက်ပဲ နေခဲ့တာလေ။
(နေမျိုး - မြည်နေတဲ့ထရမ်းပက် - ဝတ္ထုတိုငယ်စု - ပထမအကြိမ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၀၆)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 11:34 AM3comments
(၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ဇွန်လ၊(၁၇)ရက်-ရက်စွဲနဲ့ E-Journalမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ပထမဆုံးပို့စ်ပါ။ E-Journal မှာပါဝင်ရေးသားခြင်း တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်တာပါခင်မျာ။ ဒါဟာ E-Journal ဝိုင်းတော်သားများနှင့် E-Journal ရဲ့ မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမများကို ကျေးဇူးစကားဆိုခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 4:53 PM3comments
Comment on "What Is Love???" - နှလုံးလှဖို့ အလှဆုံးသို့ (၇)
မိမိကိုယ်ကိုမိမိ မချစ်လို့ရှိရင် သူတစ်ပါးကိုချစ်ဖို့ရာ မတတ်နိုင်ပါဘူး။
မိမိကိုယ်ကို ပိုပြီးတော့ အသိဥာဏ်ကြီးမားလာအောင် တိုးတက်လာအောင် လုပ်တာနဲ့၊ သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲ ပိုပြီးတော့ အသိဥာဏ်ကြီးမားလာအောင်၊ တိုးတက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးတာဟာ မေတ္တာပါ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဥာဏ် ရင့်ကျက်လာအောင်၊ မြင့်မြတ်လာအောင် လုပ်ပြီးတော့ သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲ စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဥာဏ်ရင့်ကျက်လာအောင် အကူအညီပေးနိုင်တာ အထောက်အကူ ပေးနိုင်တာဟာ မေတ္တာပါပဲ။
If I truly love other I will obviously order my behavior order in suchaway as to contribute the utmost to his or her spiritual growth.
အကယ်၍ ငါဟာ သူတစ်ပါးကို တကယ်အစစ်အမှန် ချစ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့နေပုံ၊ ထိုင်ပုံ၊ ပြောပုံ ဆိုပုံကို ပြင်ရမယ်တဲ့။ သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ အသိဥာဏ် လေးနက်မှု၊ ရင့်ကျက်မှုကို အစွမ်းကုန် အထောက်အကူပြုမယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နေပုံ ထိုင်ပုံ၊ ပြောပုံ ဆိုပုံကို ပြင်ရလိမ့်မယ်။
The only true end of love is spiritual growth.
မေတ္တာရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဦးတည်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်ဟာ အသိဥာဏ်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်မှု၊ တိုးတက်မှု၊ မြင့်မြတ်မှုရှိအောင် အထောက်အကူပေးတာပဲ။
It is actually impossible to forsake our own spiritual development in favour of someone else’s.
ကိုယ့်မှာ လေးနက်မြင့်မြတ်တဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင် မလုပ်ဘဲနဲ့ သူတစ်ပါးမှာ လေးနက်တဲ့၊ မြင့်မြတ်တဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့စိတ်ဓာတ် ဖြစ်ပေါ်လာအောင် လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။
သူတစ်ပါးကို မေတ္တာထားနိုင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဖက်ဖက်က ပိုပြီးတော့ ကြီးပွားလာအောင်၊ တိုးတက်လာအောင်၊ အသိဥာဏ်နဲ့ စိတ်ဓာတ်တိုးတက်မှု၊ ရင့်ကျက်မှုဖြစ်လာအောင် အထောက်အကူပေးမှသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
They think of love in terms of having positive feelings for others, taking care of others and as self-sacrifice.
စိတ်ထဲမှာ ကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးတွေ ဖြစ်လာတယ်။ သူ့ကိစလေးတွေကို အများကြီး ဆောင်ရွက်ပေးချင်တယ်။ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုယ့်အကျိုးကို အနစ်နာခံပေးလိုက်တယ် ဆိုတာကို ချစ်တယ်လို့ ထင်ကြတယ်။
These aspects of love are undoubtedly important parts of the picture but what they do not always remember is that at its highest love is more closely allied with realism than with feeling.
ဒီလိုအချက်တွေဟာ အရေးကြီးတာမှန်ပေမယ့် မေတ္တာရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံး ရောက်တဲ့အခါမှာ မေတ္တာဟာ ခံစားမှုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး အကောင်းဆုံး အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးတာ ဖြစ်သွားပြီ။
မေတ္တာဆိုတာ ခံစားမှုမဟုတ်တော့ဘဲ အကျိုးကိုလိုလားခြင်း ဖြစ်သွားတယ်။ အကျိုးကိုလိုလားခြင်းဆိုတာ အသိဥာဏ်ဖြစ်သွားပြီနော်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က တကယ်စိတ်ချမ်းသာနေမှသာ သူတစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာမှုကို တကယ်လိုလားတဲ့စိတ် အပြည့်အဝဖြစ်တယ်။
ကိုယ်က သူ့ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် သူစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အခါမှာ ကိုယ်က စိတ်မဆင်းရဲအောင် နေနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်။ ဒါ ဘာကြောင့်တုန်းဆိုတော့ သူ့မှာ သောကကြီးလို့ ကိုယ့်ဆီလာတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ကပါ သောကတွေနဲ့ ခေါင်းမီးတောက်သွားရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ ဘာမှ မလုပ်တတ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် သူ့မှာ သောကကြီးနေတုန်းမှာ ကိုယ်က တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ နေနိုင်ရမယ်။ emotionally independent ဖြစ်ရမယ်။
သောကသိပ်ကြီးလွန်းတဲ့လူဟာ တကယ့်မေတ္တာစစ်ထားတဲ့လူ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ငါ့မှာတော့ သူ့ကိုချစ်လိုက်ရလို့ သောကတွေဖြစ်လိုက်ရတာလို့ တွေးမယ်နော်။ အဲဒါ မေတ္တာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ သမုဒယ သံယောဇဉ်၊ ပူလောင်တယ်။ မေတ္တာဟာ ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်တယ်။ ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပူလောင်မှုကို မဖြစ်စေဘူး။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မှီခိုမှုကင်းတာ (Psychologically independent) ဖြစ်ရမယ်။ သူစိတ်ချမ်းသာအောင် ငါလုပ်ပေးမှ ဖြစ်မယ်လို့လည်း မတွေးတော့ဘူး။ ငါ စိတ်ချမ်းသာအောင် သူလုပ်ပေးမှ ဖြစ်မယ်လို့လည်း မတွေးတော့ဘူး။ တကယ့်မေတ္တာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတော့ သူ့ဟာသူ စိတ်ချမ်းသာအောင် နေတတ်သွားအောင် နည်းလမ်းပေးလိုက်တယ်။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဟာ အဲဒီလိုမေတ္တာမျိုးနော်။ မြတ်စွာဘုရားက သူများကို စိတ်ချမ်းသာသွားအောင် လုပ်ပေးလိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ချမ်းသာအောင်နေနည်းကို ပေးလိုက်တာ။ သူတစ်ပါး စိတ်ဆင်းရဲနေလို့ မြတ်စွာဘုရားက စိတ်ဆင်းရဲနေမှာလား၊ ဘယ်သူ့အတွက်မှ စိတ်မဆင်းရဲပါဘူး။ အင်မတန် မေတ္တာကရုဏာ ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ မြတ်စွာဘုရားဟာ ဘယ်သူ့အတွက်မှ မပူပါဘူးတဲ့။ အဲဒါ မေတ္တာ အစစ်ပဲနော်။
မေတ္တာဆိုတာ ငါ မေတ္တာစစ်ထားမယ်ဆိုတာနဲ့လည်း ဖြစ်မသွားဘူး။ အင်မတန် အသိဥာဏ်ကြီးမှ အမြဲတမ်း ကိုယ့်စိတ်ကို သိနေ၊ ကြည့်နေမှ ဖြစ်လာတယ်။
(မေတ္တာတရား - ဆရာတော်ဦးဇောတိက) မှ ထုတ်နုတ်ကူးယူပါသည်။
မေတ္တာဆိုတာ လွတ်လပ်တဲ့သူ စိတ်ဓာတ်အင်အားကြီးမားတဲ့သူ သူ့စိတ်မှာပြည့်စုံနေတဲ့သူရဲ့ စိတ်မှာ အလိုအလျောက်ဖြစ်လာတာ။ လုပ်ယူရတာမဟုတ်ဘူး။ မေတ္တာမှာ ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မရှိဘူး။ ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မရှိဘဲ ချစ်တာဟာ အင်မတန် စိတ်ဓာတ်အင်အားကြီးပြီး လွတ်လပ်နေမှ ဖြစ်နိုင်တယ်။
(လွတ်လပ်သောစိတ် - ဆရာတော်ဦးဇောတိက) မှ
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 10:37 AM2comments
စာလည်းမရေးဖြစ်တာကြာပြီမို့ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့နေ၊မြင်နေရတာနဲ့စဉ်းစားမိတာလေးတွေ စိတ်ထဲဝင်လာလို့ရေးလိုက်တာပါ….
E-journal ကိုအလည်လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုရေးပေးကြပါလို့လည်း Request လုပ်ပါတယ်ရှင်….
အချစ်ဆိုတာက ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ အရာတခုပဲလား???
ခုချိန်မှာ ဒီလူတယောက်ကို အရမ်းချစ်ပါတယ်ဆိုပြီး အနေဝေးသွားချိန်မှာ သူကို မေ့ပြီး တခြားတစ်ယောက်အပေါ် ချစ်မိတယ်ဆိုတာ???
ချစ်သူချင်း စိတ်ချင်း ဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲလား???
သူ့ရင်ထဲ နင့်နေအောင်ခံစားရသလို ကိုယ့်ရင်ထဲမှာလည်း နင့်နေအောင်ခံစားရတယ်ဆိုတာ ရောတကယ်ပဲရှိလား????
နောက်…. အချစ်ဦးကို မြေးဦးရတာတောင်မမေ့ဘူးဆိုတာရော တကယ်ပဲလား???
ချစ်သူရှိတဲ့ မယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို မေးဖူးတယ်….
အစားအစာတခုရဲ့အရသာကို မစားဖူးပဲနဲ့ အဲဒီအစားအစာရဲ့အရသာဆိုတာ ဘယ်လိုဆိုတာပြောဖို့ခက်တယ်တဲ့
အဲလိုပဲ . . . မချစ်ဖူးပဲနဲ့ အချစ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုပြောဖို့ခက်တယ်တဲ့…
လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်မိသွားတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားရလဲ???
လူတစ်ယောက်ကို အမြဲမြင်ချင် တွေ့ချင်နေမယ်…
သူနဲ့ အတူတူရှိနေချိန်တွေဟာ ကိုယ့်အတွက် ပျော်စရာအချိန်လေးတွေပဲဆိုရင် ….
ပျော်စရာလေးတွေကြုံလာတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို သူ့ကို မျှဝေပေးချင်ရင်…
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်က ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တခြားတစ်ယောက်ကို ဂရုတစိုက်ရှိနေမှာကို မနာလိုဖြစ်နေခဲ့ရင်…
ကိုယ့်မှာပြသနာတခုခုကြုံလာရင် စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံလာခဲ့ရင် သူဆီကဖေးမမှုကို လိုချင်နေခဲ့ရင်…
နောက်…. အချစ်ဦးကို မြေးဦးရတာတောင်မမေ့ဘူးဆိုတာကော တကယ်ပဲလား???
သူ့ရဲ့ရည်းစားဦးက သူနဲ့ကွဲလို့ အခုဆိုကလေးတစ်ယောက်တောင်ရနေပြီတဲ့…
စိတ်ညစ်စရာတခုခုကြုံလာရင် ရည်းစားဦးကိုပဲသတိရပြီး သူ အဆင်မပြေတာတွေကို ရည်းစားဦးကိုပဲပြောပြပြီး သူမဆီကဖေးမမှုကိုပဲ လိုချင်တယ်တဲ့…
ခုလက်ရှိကောင်မလေးကို မချစ်လို့မဟုတ်ဘူး… သစ္စာဖောက်တာလည်းဟုတ်ဘူးတဲ့…
ကိုယ်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူနဲ့စကားပြောခွင့်ရရင် တော်တော်စိတ်သက်သာရတယ်ပြောတယ်…
ဒီကိစ္စမှာ ရည်းစားဦးနဲ့သူနဲ့ဘာကြောင့်ကွဲသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာ သေချာမသိပေမဲ့…
တော်တော်ကို ချစ်နိုင်ကြတယ်လို့ ပြောရမလား???
ဘယ်သူပဲဖြစ် လူတိုင်းက ဂရုစိုက်တာကိုခံချင်ကြတယ်…
လူတစ်ယောက်က ကိုယ်အပေါ်ဂရုစိုက်တာနဲ့ အဲဒီလူက ကိုယ့်ကိုတော်တော်ချစ်တယ်လို့ထင်ရင် မှားမှာပဲ…
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောဖူးတယ် ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူက လူတိုင်းကိုဂရုစိုက်မှာပဲတဲ့
ချစ်သူနှစ်ယောက်ကြားမှာ မာန်မာနတွေ ရှိသင့်သလား???
ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူကို ရအောင်ယူမှာလား??? စွန့်လွှတ်မှာလား???
အဖြေက ချစ်တဲ့သူအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်…
ချစ်သူကိုရအောင်ယူလို့ သူစိတ်ဆင်းရဲရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲခံစားရပါစေ သူစိတ်ချမ်းသာတဲ့ ဘဝတခုမှာပဲ သူပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတခုမှာ သူ့ကိုထားခဲ့မှာပါ…
သူ့နေချင်တဲ့ဘဝမှာ နေခွင့်ပြုပြီး သူလိုအပ်တာကို အတိုင်းအတာတခုအထိပေးဆပ်ပေးမှာပါ…
အတိုင်းအတာတခုဆိုတာ ကိုယ်နဲ့သူအပြင် နောက်တယောက်ကို မထိခိုက်သေးတဲ့အချိန်အထိပဲ…
ကိုယ့်ဘဝကဘယ်လောက်ပဲကြမ်းတမ်းပါစေ ကိုယ်နဲ့နေလို့သူစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင် သူ့ကိုကိုယ်ဘေးမှာပဲ တသက်လုံးထားမှာပါ…
တကယ်တမ်းကျတော့ လူတွေဟာကိုယ့်ကိုကိုယ် အချစ်ဆုံးပါပဲ…
လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် သူစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်ရမယ်လို့ မယ်ထင်ပါတယ်…
ကိုယ့်လိုဘတခုတည်းကိုကြည့်ပြီးနေမယ်ဆိုရင် သူ့ကို ကိုယ်ချစ်တာမဟုတ်ပဲ…
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချစ်တာပဲလို့ ပြောရင်ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်……….
*** ပေးဆပ်ချစ်နဲ့ ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ချစ်သူတွေရဲ့ ၉ နှစ် နဲ့ ၉ လပြည့် အမှတ်တရပါ ***
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 11:17 AM7comments
ပြေးလွှားနေဆဲ . . .
ရုန်းထွက်နေဆဲ . . .
ယုံကြည်ရာလျှောက်လိုက်တော့ခရောင်းလမ်းပေါ့ . . .
ကိုယ်နဲ့အတူမကွဲမကွာ . . .
မေတ္တာခြုံစောင်လေးနဲ့ပေါ့ . . .
ပွင့်ဖတ်နံ့လေးသင်းနေတဲ့ပန်းခင်းလေးဘေးမှာ တို့အတူဆုံမယ်နော် . . .။
(ကိုနယုန်မိုး Draftနဲ့သိမ်းထားတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ Label မပေးရသေးပေမဲ့ ကဗျာခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ကိုနယုန်မိုးရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မပါတာတော့ သေချာပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်မယ်လဲ ထင်ပါရဲ့။.....။ သုခမိန်)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက နယုန်မိုး at 7:30 PM3comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် ကဗျာ့ ပန်းခင်း, နယုန်မိုး
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 8:25 PM2comments
တစ်လောလေးကပဲ “ဦးနှောက်မြူးသူတစ်ယောက်”ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီးပါတယ်။ ဖတ်ချင်လွန်းတယ်ပြောလို့ ရန်ကုန်ကသူငယ်ချင်းက လူကြုံနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ချင်းတွင်းမှာ အခန်းဆက် ဖတ်နေတုန်း လုံးချင်းထွက်တော့လည်း ဖတ်ချင်တာပါပဲ။ ချင်းတွင်းက လတိုင်းမဝယ်ဖြစ်ဘူးကိုး။ ဒါနဲ့ပဲ တစ်ခြားစာမဖတ်တော့ပဲ သူ့ကိုပဲဖတ်လိုက်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့စာအုပ်လေးပါ။ မဖတ်ရသေးရင် ညွှန်းချင်ပါတယ်။
စာအုပ်အစပိုင်းမှာ ဘာသာပြန်သူ (စာရေးသူ)ပြောသလို သူတို့ဆီက အတုယူစရာတွေ (ဒါမှမဟုတ်လည်း) သိထားသင့်တာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အားကျစရာ၊ ဘက်ပေါင်းစုံမှ အတုယူစရာတွေပါ။ ပညာကိုချစ်မှ နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအကြောင်းပြောရင် အရှိန်အဟုန်ဆိုတာ ပါလာမယ်ဆိုတာ ထင်ရှားစေပါတယ်။ ပညာဆိုတာကို အားပေးပုံ၊ ပညာတတ်ကို နိုင်ငံတော်အဆင့် တန်ဖိုးထားပုံတွေနဲ့ ကောင်းတဲ့စာအုပ်ပါပဲ။
ကျွန်တော့်စိတ်မှာ နည်းနည်းလေး စွဲသွားတာက အသက်၂၁နှစ်မှာ ဒေါက်တာဘွဲ့ရနေပါပြီ။ တောက်လျှောက်လည်း စိတ်ရောဂါရနေတဲ့ ပညာတတ်ကို မပစ်ပယ်ပဲ ထူးတဲ့ဦးနှောက်တစ်လုံးကို တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ သူတို့ရဲ့အလေ့အထပါ။ လူမှုရေးအရ အားနည်းတယ်ပြောလို့ရတဲ့ သူ့အမူအကျင့်တွေကို အမြင်တစ်မျိုးနဲ့ ကြည့်ပေးကြတယ်ထင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်လည်းရှိသဗျ။ ကြည့်ဖူးတယ်။ အတော်တောင်ကြာပါပြီ။ A Beautiful Mind ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါပဲ။
ထားတော့။ ပြောချင်တာက စာရေးသူရဲ့စေတနာ။ တစ်ခါကလည်း “ဦးနှောက်များကို မီးညှိခြင်း”ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ခဲ့ဖူးတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံက သမ္မတကြီးရဲ့ လူငယ်တွေ(ကျောင်းသားတွေ)အပေါ်မှာ ထားတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ စေတနာတွေကို ဖတ်ရပါတယ်။ ကောင်းတဲ့စာအုပ်ပါပဲ။ ဖတ်ပြီးကြသူတွေလည်းများမှာပါ။ မဖတ်ရသေးရင် ဒါလည်းဖတ်သင့်တဲ့ စာတစ်အုပ်ပဲ။
စာရေးသူက ဒေါက်တာဘွဲ့ရ ရူပဗေဒပညာရှင်လို့ ပြောပါတယ်။ အကြောင်းအရာလေးတွေ ရွေးတတ်တာကို သဘောကျနေတာပါ။ လူငယ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်ပါ။ (ပြောသာပြောနေရတာ ကျွန်တော်တို့အရွယ်ကလည်း လူငယ်တန်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အသုံးမကျတာကတော့ ပြောမဆုံးပေါင်၊ တောသုံးတောင်ပေါ့ဗျာ။ ထားတော့။) လူငယ်တွေကို ပညာဆိုတာ ဘာလည်းသိအောင်။ လေ့လာတတ်အောင်။ တန်ဖိုးထားတတ်အောင်။ ပြောနေတဲ့ စာတွေလို့ တွေးမိသဗျ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ တစ်ယောက်အားဖြင့် မစွမ်းသာဆိုတာကို ပြောနေသလိုပါပဲ။ သိုင်းဖို့၊ ဝိုင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့။ ပညာရေးမှာဆိုရင်လည်း ကျောင်သား၊ ဆရာ၊ မိဘတွေတင်မက သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ထိရောက်အောင် စွမ်းဆောင်မှုတွေ လိုအပ်ကြောင်းလည်း မြင်သာစေပါတယ်။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ ဦးနှောက်တွေအကြောင်းပါပဲ။ ရေရှည်ကိုကြိုတွေးပြီး နူးညံ့စွာပြုပြင်ရတာတွေပေါ့။ ပါရမီရှင်တစ်ဦးဆိုတာ အလကားတော့ မဖြစ်တန်ရာဘူးလို့လည်း တွေးလေရဲ့။
နောက်တစ်အုပ်ပြောချင်သေးတာက “ပိုးချည်မျှင်မိုးနဂါး”ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ။ အဲဒီ့စာအုပ်မှာဆိုရင် ပေါက်ဖော်တို့ရဲ့ ပညာတတ်ကိုမြှောက်စားရင်း တိုးတက်ရေးကို ကြိုးစားသွားတာ မြင်သာနေသလိုပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ကြေငြာခ မရဘဲ စာရေးသူဘိုးလှိုင်ရဲ့ စာသုံးအုပ်ကို ကြော်ငြာဝင်လိုက်တာပါ။ တစ်ကယ်တော့ စာဖတ်အားကောင်းပုံရတဲ့၊ စေတနာပါတဲ့စာရေးသူရဲ့ ဦးနှောက်တွေကို စိတ်ဝင်စားပုံ။ နောက်ပြီး ဦးနှောက်တွေအရေးကြီးပုံနဲ့ ပညာတတ်ကို တန်ဖိုးထားဖို့လိုကြောင်းလေးတွေကို စိတ်မှာတွေးမိနေလို့ အကြောင်းရှာပြီး ညွှန်းလိုက်ကြောင်းပါ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 7:00 PM3comments
ဒါပေမဲ့ ရှိနေခြင်းဟာ မရှိခြင်းမှာဖြစ်တည်နေတယ်။
ဟုတ်တာပေါ့။ ငါ့မှာရှိနေတယ်ဆိုတာတွေက မရှိခြင်းတွေကိုး။
မရှိခြင်းတွေ ရှိနေကြောင်းကိုတော့ သက်သေပြဖို့မလိုပါဘူးကွယ်။
မမြင်ရတဲ့အရိပ်။ မကြားရတဲ့စကားသံနဲ့ ငါ့အတွက်မဟုတ်တဲ့ မင်းကိုယ်နံ့၊ ဒါ..
အအေးဓါတ်ကိုမွေးထုတ်ရင် ဒါ - “မိုး”ဟုတ်တယ်လေ။
အချမ်းကြောက်သူအတွက် အသူရာတစ်ခွက်ရှိနေရင် ကိစ္စ ပြီးစေပါတယ်ချစ်သူ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 6:31 PM5comments
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က သဲကန္တာရတခုမှာ ခရီးအတူသွားရင်း၊ လမ်းမှာ စကားများကြတယ်။ သူငယ်ချင်းတယောက်က ကျန်သူငယ်ချင်းရဲ့ မျက်နှာကို စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ ရိုက်လိုက်မိတယ်။ အရိုက်ခံရတဲ့ သူငယ်ချင်းက ငါ့သူငယ်ချင်းက ငါ့ကို နာကျင်အောင်လုပ်တယ် ဆိုပြီး သဲပေါ်မှာ စာရေးလိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ခရီးဆက်ကြတော့ ရေကန်ငယ်လေးတခုကို တွေ့ရော။ ရေဆင်းချိုးတော့ အစောက ပါးရိုက်ခံလိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းက ရေနစ်သွားတယ်။ ပါးကိုရိုက်လိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းက ရေထဲက ဆယ်တော့ - အသက်ချမ်းသာရာရသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းက ငါ့သူငယ်ချင်းက ငါ့အသက်ကို ကယ်လိုက်တယ် ဆိုပြီး ကျောက်တုံးပေါ်မှာ ရေးထွင်းလိုက်တယ်။
အသက်သခင် သူငယ်ချင်းက မေးတယ် - အစောက သဲပေါ်မှာ ရေးပြီး အခုတခါ ဘာ့ကြောင့်များ ကျောက်တုံးမှာ ရေးထွင်းရသလဲ။
ကျောက်ပေါ်မှာ ရေးထွင်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်းက ပြန်ဖြေတယ် - ဒီလိုပါ သူငယ်ချင်း၊ တယောက်ယောက်က တို့ကို နာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့ရင် သဲပေါ်မှာပဲ ရေးသားမှတ်သင့်တယ်၊ ဒါမှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ လေတွေတိုက်တော့ မှတ်သားထားတဲ့ နာကျင်မှုတွေ ပျောက်သွားအောင်လို့ပါ၊ သူတပါးက ကိုယ့်ကို ကျေးဇူးပြုထားတယ်ဆိုရင်ဖြင့် တသက်တာ မမေ့အောင်လို့ ကျောက်တုံးပေါ်မှာ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားအပ်ပါတယ်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 2:43 PM6comments
တစိမ့်စိမ့် နှိပ်စက်နေတဲ့ နွေ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 11:02 AM6comments